FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM : Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ?
Efa tsy misy resy lahatra amin’Ingahy Ravalomanana Marc intsony ireo ekipa sy antoko nitovy tadin-dokanga taminy fahiny. 2 mars 2021
Raha ny fanambaràna nataon’ny Mfm, omaly, tetsy amin’ny Hotely Colbert, tsy miara-dalana ary tsy ao anatin’ny RMDM izy ireo na mijoro ho Mpanohitra aza. Manomboka tonga saina avokoa izany ireo mpanao politika nivondrona tao anatin’ny RMDM rehetra. Ahoana tokoa moa no iarahana amin’Ingahy Ravalomanana Marc kanefa ny azy tsy misy afa-tsy ny tombontsoany manokana no katsahiny ?
Tsy adala ny MFM fa matoa izy ireo tsy niditra tao anatin’io Rodoben’ny Mpanohitra RMDM io dia satria tsapan’izy ireo tsara fa fitiavan-tenan’Ingahy Ravalomanana Marc no antony nananganana azy io. Mety tsapan’izy ireo, ohatra, fa manomboka very laza sy tsy mahaliana ny olona intsony ny Tim dia aleo manangana vondrona hafa indray hiafinafenana sy hatao fitaovana.
Voalaza koa fa tsy fotokevitra fanoherana intsony no misy eo anivon’ny Mpanohitra RMDM fa karazana fanindrahindrana ny antoko TIM sy fanaovana fitaovana hameranana an-dRavalomanana eo amin’ny Fitondrana sy hamerenana ny zavatra nataony tamin’ny taona 2002. “Tsy manohana tsangan’olona ny antoko MFM ka tsy terena hanohana an’i Ravalomanana…”, hoy ny MFM, omaly. I Pety Rakotoniaina aza nanamafy mihitsy fa : “tsy ilain’ny Firenena intsony ity Filoha teo aloha ity satria efa nitondra teo saingy nandroba ny harem-pirenena sy nanagadra izay tsy nitovy firehana taminy no nataony”.